Laacibkii xulka Ivory Coast, Cheick Tiote oo geeriyooday isagoo 30-jir ah
Sunday, May 27th, 2018 - 12:53:30
Tuesday June 06, 2017 - 10:41:52 in Wararka by Muuse Cabdi
Laacibkii hore ee Ivory Coast iyo Newcastle United booska dhexe uga ciyaari jiray Cheick Tiote ayaa qabatimay oo dhintay isagoo 30-jir ah xilli uu tababar la qaadanayay kooxda shiinaha ka dhisan ee Beijing Enterprises Isniintii, sida uu sheegay wakiilkiisu Isniintii.
Tiote, ayaa saftay wax ka badan 150 muuqaal, muddo 7sano ah oo uu la shaqeynayay kooxda Newcastle, wuxuu ahaa nin ku guuleystay African Nations Cup sanadkii 2015, wuxuu sidoo kale dhaawac ku seegay koobkii Adduunka ee 2010 iyo 2014.
"Aad ayaan uga murugsanahay geerida ku timid Cheick Tiote kaasoo goorhore oo maanta ah dhintay keddib markii uu ku qabatimay tababarka kooxda Beijing Enterprises," wakiilkiisa Emanuele Palladino ayaa u sheegay Sky Sports.
"Wax badan kama dhihi karno middan waxaan la xiriirnay qoyskiisa innagoo ka murugsan geeridiisa, wey adagtahay in aad maqasho geerida wiilkaada. Waxaan u weydiinnay in ay usoo dukadaan."
Kooxda Newcastle ayaa soo saartay qoraal ay ugu murgeyso laacibkeedii hore Website-keeda (www.nufc.co.uk).
"Waxaan aad uga xunnahay geerida ku timid Cheick Tiote isagoo kaliya 30-jir ahaa," kooxda dhowaan usoo dallacday Premier League ayaa tiri.
"Waxaan qalbiyada kala jirnaa haddaan nahay Newcastle United qoyskii uu ka baxay Cheick, saaxiibada."